Apple Watch waxay kudarsan doontaa sawir koronto sida ay sheegtay Ming Chi Kuo | Wararka IPhone
Apple Watch waxay lahaan laheyd koronto iyo dhoobada dhamaan moodooyinka
Qiyaastii 48 saacadood ka dib dhacdadii Apple, falanqeeyeheenna ugu jecel, Ming Chi Kuo, ayaa ku dhiirraday muujiyaan qaar ka mid ah faahfaahinta qalabka Waxaa ficil ahaan loo qaatay in la siiyay in la soo bandhigi doono bisha Sebtember 12 laga bilaabo 19:00 pm ee Spain.
Waxaan u qaadaneynaa inaan horeyba u ognahay waxa aan ku arki doonno Muhiimaddaas oo ka dhici doonta Tiyaatarka Steve Jobs, laakiin xaqiiqadu waxay tahay inaan wax yar ka ognahay faahfaahinta alaabooyinkaas. Kuo wuxuu ku booday barkadda wuxuuna hubiyaa taas waxaan arki doonaa taxanaha Apple Watch 4 kaas oo yeelan doona dhabarka dhoobada dhamaan moodooyinka, iyo in lagu dari doono electrocardiograph.
Way cadahay in Apple ay xooga saareyso caafimaadka iyo isboortiga maadaama ay udub dhexaad u yihiin Apple Watch. Kadib xoogaa bilaa shaki ah, kuwii ka socday Cupertino waxay arkeen waxa mustaqbalkooda smartwatch yahay, waana wadada ay soo mareen muddo dheer. Aad iyo aad u badan in xitaa laga hadlay ku dar mitirka gulukoosta dhiigga adigoon u baahnayn inaad maqaarka xoqdo, ama elektrokortiograph. Waxay u muuqataa in kan hore wali ka fog yahay fulintiisa, laakiin tan labaad ayaa gaari doonta Apple Watch Series 4 sida uu qabo Kuo.
Qofkasta oo soo maray baaritaanka electrocardiogram (ECG) wuxuu xasuustaa in ilaa 12 koronto ay ahayd in si taxaddar leh loo dhigo qeybaha kala duwan ee jirkiisa, aadna loo ilaaliyo xitaa ma uusan hadlin. Ku wareeji xayiraadahaas oo samee ECG la isku halleyn karo oo sax ah oo leh hal shidmaal oo ku xiran curcurka, Qeyb ka mid ah jirka oo xiriir joogta ah la leh dharka iyo dhaqdhaqaaqa, waa caqabad aan shakhsiyan ka shaki qabo in Apple ay ku guuleysatay inay ka adkaato (in kastoo aan jeclaan lahaa). Haddii wixii Kuo sheegay ay rumoobaan, waxay noqon doontaa tallaabo weyn oo horay loo qaaday Apple ka hor tartanka iyo horumar ballaaran oo loo fidiyo dhakhaatiirta iyo bukaannada gacmahooda ku haysta aalad qiimo aad u weyn u leh xakamaynta cudurrada wadnaha iyo xididdada.
Marka lagu daro dareemahan ECG, waa in lagu daraa in Kuo ay hubineyso in dhabarka Apple Watch uu ahaan doono dhammaan moodooyinka dhoobada. Ilaa hadda qalabkan waxaa loo isticmaalay kaliya birta (iyo dhoobada) Apple Watch, ahaanshaha moodooyinka quraaradaha Sportiga. Waa maxay badeecada kuu soo saaraysa rajada ugu badan adiga? Apple Watch ama iPhone XS? Durba shaki baa i haya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Apple Watch waxay lahaan laheyd koronto iyo dhoobada dhamaan moodooyinka
Waxaa jira waxyaabo badan oo lagu baaro Apple Watch. Qalabkani wax badan ayuu ballan qaadayaa mustaqbalka. IPhone-ka, taa bedelkeeda, wuxuu la halgamayaa goob durdur hore u jirtay oo wax yar dib loo qeexi karo.
Waxa kaliya ee laga filan karo in furahaani uu soo saaro ayaa ah saacadda Apple.
IPad Pro leh USB-C iyo MacBook jaban ayaa naga yaabin kara Keynote